Amacandelo ama-3 amaTekhnoloji aBapapashi ngo-2021 | Martech Zone
Kunyaka ophelileyo bekunzima kubavakalisi. Ngokunikwa isiphithiphithi se-COVID-19, unyulo, kunye nengxwabangxwaba yezentlalo, abantu abaninzi basebenzise iindaba ezininzi kunye nokuzonwabisa kulo nyaka uphelileyo kunanini na ngaphambili. Kodwa ukuthandabuza kwabo kwimithombo yokubonelela ngolwazi kuye kwafikelela kwinqanaba eliphezulu, njenge Ukunyuka kwamaza olwazi olungeyonyani Ukutyhala ukuthembela kwimidiya yoluntu kunye nakwiinjini zokukhangela ukurekhoda.
Ingxaki inabapapashi kuzo zonke iintlobo zomxholo osokolayo ukufumana indlela abanokuphinda babathembe ngayo abafundi, babagcine bezibandakanya kwaye baqhube ingeniso. Imiba enzima, konke oku kuza ngexesha xa abapapashi bekwasebenza ngokupheliswa kwe-cookies yomntu wesithathu, ethembele kubaphulaphuli ejolise ekuhambiseni iintengiso ezigcina izibane zikhanya kunye neeseva ziqhuba.
Njengokuba siqala unyaka omtsha, sonke esinethemba lokuba ayizukuphazamiseka, abapapashi kufuneka baphethukele kwitekhnoloji enokubenza bakwazi ukunxibelelana nabaphulaphuli ngokuthe ngqo, ukusika umntu ophakathi kwimidiya yoluntu kunye nokubamba kunye nokunyusa idatha yomntu wokuqala . Nazi iindlela ezintathu zobuchwephesha eziza kunika abapapashi isandla sokwakha izicwangciso zabo zedatha yabaphulaphuli kunye nokuphelisa ukuthembela kwabo kwimithombo yomntu wesithathu.
Isicwangciso soku-1: Ukwenza ubuqu kwinqanaba.
Abapapashi abanakulindela ngokwenyani ukuba ukusetyenziswa kwemithombo yeendaba okukhulu kuya kuqhubeka. Abathengi baye boyiswa lulwazi olungaphezulu, kwaye uninzi luye lwancipha ngenxa yempilo yabo yengqondo. Nokuba kukuzonwabisa kunye nemithombo yeendaba yokuphila, kubonakala ngathi uninzi lwabaphulaphuli sele lufikelele kwinqanaba lokugcwala. Oko kuthetha ukuba abapapashi baya kufuna iindlela zokubamba ingqalelo yababhalisi kwaye abagcine bebuya.
Ukuhambisa umxholo owenzelwe wena yenye yeendlela eziphambili zokwenza loo nto. Ngenxa yokuxinana okungaka, abathengi abanalo ixesha okanye umonde wokuhlengahlengisa konke ukuze bafumane eyona nto bafuna ukuyibona, ke baya kutsalela ngaphandle kwiivenkile ezigcina umxholo wazo. Ngokunika ababhalisile okungaphezulu koko bafuna, abapapashi banokwakha ukuthembakala okungaphezulu, ubudlelwane bexesha elide nababhalisi abaya kuxhomekeka kubanikezeli bomxholo abawuthandayo ukuba bangachithi ixesha labo ngesiqulatho esingakhathaliyo abangakhathaliyo ngaso.
Isicwangciso 2: Amathuba ngakumbi kwiTekhnoloji ye-AI
Ewe kunjalo, ukuhambisa umxholo owenzelwe wena kubo bonke ababhalisile akunakwenzeka ngaphandle kokuzenzekelayo kunye nobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha bokunceda. Iqonga le-AI ngoku linokulandela umkhondo wokuziphatha kwabaphulaphuli kwisiza-ukucofa kwabo, ukukhangela kunye nokunye ukubandakanyeka- ukuze bafunde ukhetho lwabo kwaye bakhe igrafu yesazisi echanekileyo yomsebenzisi ngamnye.
Ngokungafaniyo neicookies, le datha ibotshelelwe ngokuthe ngqo kumntu ngokusekwe kwidilesi ye-imeyile, ukubonelela ngokuthe ngqo ngakumbi, ngokuchanekileyo nangokuthembekileyo kuseto lobukrelekrele babaphulaphuli. Ke, xa loo msebenzisi engena kwakhona, i-AI iyamqonda umsebenzisi kwaye isebenze ngokuzenzekelayo umxholo owawubambe ukubandakanyeka ngokwembali. Itekhnoloji efanayo ikwavumela abapapashi ukuba bathumele ngokuzenzekelayo lo mxholo ubuqu kubabhalisi ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya i-imeyile kunye nesaziso sokutyhala. Ngalo lonke ixesha umsebenzisi enqakraza kumxholo, inkqubo iya kuba nobukrelekrele, ifunde ngakumbi malunga nokhetho lwabo ukulungelelanisa umxholo wobuqu.
Isicwangciso-qhinga 3: Ukutshintsha ubheke kwiZicwangciso-qhinga zeDatha
Ukufumanisa ukuba ungayiphelisa njani ilahleko yecokies kuyinxalenye yedabi. Kwiminyaka, abapapashi baxhomekeke kwimidiya yoluntu ukusasaza umxholo kunye nokwakha uluntu lwababhalisile ababandakanyekayo. Nangona kunjalo, ngenxa yeenguqu kwimigaqo-nkqubo kaFacebook, umxholo wabapapashi ubekwe phambili, kwaye ngoku, ikwabambe ukubanjwa kwedatha yabaphulaphuli. Kuba lonke utyelelo lwesiza oluvela kuFacebook kukuhanjiswa kwezithuthi, iFacebook iyodwa ibambelele kwidatha yabaphulaphuli, oko kuthetha ukuba abapapashi abanandlela yokufunda ngezinto ezithandwa ngabakhenkethi kunye nomdla wabo. Ngenxa yoko, abapapashi abanakunceda ekujolise kubo ngomxholo wobuqu esaziyo ukuba abaphulaphuli bafuna.
Abapapashi kufuneka bafumane iindlela zokushenxisa ekuthembekeni kokugcwala komntu wesithathu kwaye bazakhele i-cache yedatha yabaphulaphuli. Sebenzisa le 'datha inabanini' ukujolisa kubaphulaphuli ngemixholo eyenzelwe wena kubaluleke ngakumbi njengokuthembela kuFacebook nakwamanye amaqonga ezentlalo. Ushicilelo olungasebenzisi iindlela zokuqokelela kunye nokusebenzisa idatha yabaphulaphuli ukuhambisa umxholo owenzelwe wena ngakumbi luya kuphulukana namathuba okufikelela kunye nokubandakanya abafundi kunye nokuqhuba ingeniso.
Ngelixa sonke sizama ukufumana indlela "yesiqhelo esitsha," isifundo esinye senziwe sacaca gca: imibutho ecwangcisela okungalindelekanga, egcina ubudlelwane obuqinileyo bomntu nomnye kubathengi bayo, ibangcono kakhulu Ithuba lemozulu ngalo naluphi na utshintsho olunokuza. Kubapapashi, oko kuthetha ukunciphisa ukuthembela kubantu besithathu abasebenza njengabagcini-masango phakathi kwakho nababhalisi bakho kwaye endaweni yokwakha kunye nokusebenzisa idatha yabaphulaphuli bakho ukuhambisa umxholo owulungiselele bona.
tags: aiubuchwepheshe bokufakelwaIinkcukachaamacebo edathaFacebookNgokwezifisoUmvakalisiPublishingIsicwangciso sobugcisaTechnologyiqhinga lobuchwepheshe